ပီတိမျက်ရည်ကျရတဲ့ နေ့လေးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Celebrities – Local Celebrity – Duwun
ပီတိမျက်ရည်ကျရတဲ့ နေ့လေးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပထမဆုံး လှူဒါန်းမှုမှာ ရှော့တောင် ရသွားခဲ့တာတဲ့။
Myat 2018-05-14 12:07:02.0, 2018-05-14 12:07:02.0
ခိုင်နှင်းဝေ ဦးစီးတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းဟာ ဒီနေ့(မေ၁၄ရက်)မှာ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်တဲ့ အိမ်ထောင်(၄)စုအတွက် သွားရောက်လှူ ဒါန်းဖြစ်တယ်လိုက သိရပါတယ်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကို ခိုင်နှင်းဝေတို့ ပရဟိတအသင်းက သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဟာ အခုဆိုရင် တတိယအကြိမ်မြောက် ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီ။
တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်လှူဒါန်းဖြစ်နေတဲ့ သူတို့အသင်းရဲ့ အလှူဖြစ်ပြီး ပီတိမျက်ရည်များ ကျရတဲ့နေ့လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးလို့ ခိုင်နှင်းဝေက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။အိမ်ထောင်စုတွေကို ပထမဆုံး လှူဒါန်းဖြစ်တုန်းကဆိုရင် ရှော့ဖြစ်သွားလောက်အောင်ကို ခံစားရတယ်လို့ Duwun media ကို ဖြေဆိုဖူးပါတယ်။
"အိမ်ထောင်စုတွေကို တစ်လတစ်ခါတော့ ပုံမှန်လှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အမ ပထမစစလှူဒါန်းကဆိုရင် ရှော့ဖြစ်သွားမလားလို့တောင် ခံစားရတယ်။ အမက အရမ်းမျက်ရည်ခိုင်တယ်။ ဒေါသအရမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာ မျက်ရည်ကျတတ်တာ အမကသိပ်မငိုတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်စုတွေကို စလှူတုန်းက သူတို့လည်း ဝမ်းသားပြီး အမကို ဖတ်ငို လက်အုပ်ချီတဲ့အချိန်အမ တေ်ာတေ်ာကို စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ရှော့လည်းဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုလှူတဲ့အလှူကိုလည်း အမလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်။ ဘာနဲ့မှလည်း မတူပါဘူး။ " ဆိုပြီး ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်စုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယခုလို ရေးသားထားပါသေးတယ်။
"ကျွန်မရဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းမှယနေ့အလှူမှတ်တမ်းပါရှင်... ကျွန်မအပါအဝင် အဖွဲ့သားတွေ, တစ်လတစ်ခါ ပီတိမျက်ရည်များကျရတဲ့ နေ့လေးပါ...
၁။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း (လေဖြတ်ထားသည်)အသက် ၇၂နှစ်တောင်ဒဂုံမြို့နယ်. အလုပ်အကိုင်မရှိ ရပ်ကွက်မှကျွေးထားရ.
၂။ မခင်စန်းလှိုင် အသက်၄၄နှစ် သား,သမီး ၇ယောက်အလုပ်အကိုင်မရှိ , နေစရာမရှိ , ယောက်ကျားဆုံးတာ၁၀လရှိပြီ...
၃။ မခင်စန်းဦး အသက်၃၉နှစ် သား,သမီး ၈ယောက်ယောက်ကျားဆုံးတာ၃နှစ်ရှိ, ၂ရက်လောက်နေမှအဝတ်လျှော်ရသည် တစ်ခါလျှော် ၁၅၀၀လောက်ရ...
၄။ ဒေါ်ခင်ကြိုင် အသက်၇၄နှစ် သားသမီး၅ယောက်, ၂ယောက်ဆုံး. နေစရာမရှိ လမ်းဘေးအမိုးထိုးနေရ." ဆိုပြီး ပြောထားတာ အိမ်ထောင်စု(၄)စုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သံတမန် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူမတတ်စွမ်းသလောက် အားတက်သရော ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်တွေကို တစိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ပပျောက်ဖို့ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သံန္တွိဋ္ဌာန်ချထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : ခိုင်နှင်းဝေ FB
ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
အဆိုတော်ရွှေထိုက် အပါအဝင် ခုနစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူ ဖမ်းမိ
လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ သားလေး
Single Mother ဘဝကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူခဲ့တာဆိုတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ရင်သွေးလေးအကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ဇေရဲထက်ရဲ့ မေတ္တာတွေကို နားလည်လာပြီလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ဖခင်ထူးအိမ်သင်အတွက် အလှူအတန်းတွေလုပ်ပေးနေတဲ့ မိကွန်ထော
ပရိသတ်ပြောနေကြတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ မထက်
Innocence ဇာတ်လမ်းတွဲထဲကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ထက်ဦးထွဋ်
မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မိုးအောင်ရင်ရဲ့မွေးနေ့ကို သတိတရ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ စည်သူမောင်
မကြာခင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် Sai Sai Show
သားလေးရဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာကြောင့် ခံစားချက်တွေဖွင့်ဟလာတဲ့ မယ်လိုဒီ
ကိုယ်တိုင်ရေးဇာတ်ညွှန်းတွေက မြင့်မြတ်အတွက်ပါဆိုတဲ့ ရဲမင်းပိုင်
စန္ဒီမြင့်လွင်အတွက် မကြီးစိုးမြတ်သူဇာရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း